Rocky Linux musiki akatanga Ctrl IQ kutanga kutsigira chirongwa ichi | Linux Vakapindwa muropa
Rocky Linux musiki akavamba kutanga Ctrl IQ kutsigira chirongwa ichi
Kurtser akakunda (muvambi weiyo CentOS chirongwa) pakupera kwegore rapfuura ndinotaura nezve kugadzira chirongwa chekugadzira kugoverwa kweLinux nyowani "Dombo Linux", kukwanisa kutora nzvimbo yeClassic yekare, yakazivisa kuumbwa kwekambani nyowani yekutengesa «Ctrl IQ».
Kune avo vasati vaziva neRocky Linux rega ini ndikuwedzere iwe zvishoma yenyaya iyi, kubvira pakagadzirwa kugoverwa kweLinux naKurtser Gregory chikamu chesarudzo yeRed Hat timu yekuuraya CentOS (kugoverwa kweLinux kwakapihwa kumaseva uye nzvimbo dzekushandira).
Mukutaura kwake, mumiriri weRed Hat akati "kuti mukati megore rinotevera vanozotama kubva kuCentOS kuenda kuCentOS Stream, iyo inouya pamberi peiyo vhezheni itsva neRHEL."
CentOS Stream ichaenderera ichishanda senzvimbo yepamusoro (yekuvandudza) yeRed Hat Enterprise Linux. Iyo kambani inowedzera "kuti pakupera kweCentOS Linux 8 (kuvakazve RHEL 8) yako yakanakisa sarudzo ichave yekuenda kuCentOS Stream 8, inova diki delta yeCentOS Linux 8, uye ine yakajairwa marevhuru senge echinyakare shanduro dzeCentOS Linux ( Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa kubhuku ratinoita mune inotevera chinongedzo)
Tatarisana nechirevo ichi, muvambi wekuparadzira, Gregory Kurtzer, yakaburitsa pachena kuti nekuda kwenhaurirano nezvekushandurwa kweRed Hat kwenzvimbo yakatsiga yeCentOS kuita kuenderera kwe "CentOS Stream" kuedzwa kwekuedzwa yakazivisa chinangwa chayo chekugadzira patsva kuvaka kweRHEL uye akakoka vamwe vanogadzira kuti vabatane ichi chirongwa.
Iyo Rocky Linux chirongwa, icho chakanangana nekugadzira iyo nyowani yemahara vhezheni yeRHEL iyo inogona kutsiva iyo yakasarudzika CentOS.
Uye zvino nechirongwa chose chiri kuitika, sechimwe chikamu chekutanga chemari, kambani yakatogamuchira $ 4 mamirioni kubva kuIAG Capital Partners 'inogadzira masystem ekuchengetedza uye mari yemari yemari, OpenDrives Inc.
Nezve kutanga uku uye kuti pamwe vazhinji venharaunda vangangonetsekana nezve mabatirwo acho, kutaurwa kunoitwa izvo Ctrl IQ inongotarisa pakutsigira Rocky Linux kuvandudza uye nekupa rutsigiro rwepamutemo yeprojekti, pamwe nekupa Rocky Linux-based technology stack yeakakwira-kuita bhizinesi komputa.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kugoverwa kwe Rocky Linux ichavandudzwa zvakazvimiririra nekambani yeCtrl IQ iri pasi pekutonga kwenharaunda.
Ctrl IQ haizodzora chirongwa ichi, ichaita chete semumwe wevatsigiri, kuvhara mitengo uye nekupa rutsigiro rwepamutemo.
Izvo zvinhu zviri pasi peiyo Ctrl IQ tekinoroji stack yakambogadzirirwa kuti ishandiswe neCentOS, asi shanduko muRed Hat mutemo maererano nekuparadzirwa uku yakamanikidza imwe nzira, iko kusikwa kweRocky Linux kugovera.
Iyo software stack iyo iri kuvandudzwa muCtrl IQ ichavavarira kupa maturusi ekuronga zvivakwa zvezvivakwa inotenderera akasiyana masisitimu, masumbu, uye gore dhizaini. Iyo stack ine zvinhu zvinotevera zvinhu:
Rocky Linux kugovera.
Warewulf Systems Management Toolkit, yakatanga kugadzirirwa maneja akakura eLinux-based compute masumbu.
Computing Stacks Ctrl Computing Stacks, yakagadzirirwa kushandiswa munzvimbo dzinoda yakakwira komputa simba, senge muchina kudzidza, komputa yesainzi, uye yepamusoro-performance komputa.
Fuzzball chikuva chekurongedza basa uye dhata kuyerera mune zvemuno server zvivakwa.
Ctrl IQ Cloud chikuva kuvhura uye orchestrate yekufashukira uye masevhisi kune akawanda makore masisitimu
Uyewo, Izvo zvinogona kuoneka kuti mukwikwidzi wekuburitsa wekutanga Rocky Linux kuburitswa kwakarongerwa Kurume 31st.
Musi waFebruary 28, zvakarongerwa kuvhura kupinda kune iyo repository yemapakeji ekuyedza uye kutanga kuyedza iyo inosimudza.
Musi waNdira 31, kupedziswa kwekutumirwa kunoshanda kweiyo musangano zvigadzirwa uye otomatiki kurongedza system yemapakeji zvakarongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Rocky Linux musiki akavamba kutanga Ctrl IQ kutsigira chirongwa ichi
Microsoft yakaburitsa Inowedzera Inochengeterwa Injini sosi kodhi (JET Bhuruu)